War-Dagaal khasaaro geystay oo ka dhacay degaan ka tirsan Gobolka Mudug - Wardeeq 24 TV
Home Warar-ka War-Dagaal khasaaro geystay oo ka dhacay degaan ka tirsan Gobolka Mudug
War-Dagaal khasaaro geystay oo ka dhacay degaan ka tirsan Gobolka Mudug
EASTERN OGADENIA, EASTERN ETHIOPIA - OCTOBER 12TH: A company commander (in front) and some of his men are taking pleasure in shooting into a nearby wood, October 12th 2006, in Ethiopia. It allows them to make sure their weapons are not rusty. (Photo by Jonathan Alpeyrie/Getty images)
Dagaalka oo u dhaxeeyay laba maleeshiyoBeeleed ayaa waxaa uu ka dhacay miyiga degaanka Dhagtuur oo 120km 120km dhinaca koonfureed ka xiga magaalada Galkacayo.
Dagaalka ayaa waxaa la sheegay in uu salka ku haayo kufsi loo geystay Gabar yar kadib markii xalay lagala baxay Gurigeeda, sida ay sheegeen dadka degaanka.
Inta la xaqiijiyay dagaalka ayaa waxaa ku dhintay hal Ruux halka laba kale ay ku dhaawacmeen, kuwaas oo ka kala tirsan dhinacyada dagaalamay.
Wararka ayaa waxaa ay intaasi ku darayaan in xiisadda ka dhalatay Gabadha la kufsaday iyo dagaalka dhacay ay Maanta ka taagan tahay degaanka lagu dagaalamay ee Miyiga degaanka Dhagtuur ee Gobolka Mudug.
Degaano iyo degmooyin ka tirsan Gobolada Mudug iyo Galgaduud ayaa waxaa kusoo batay sanadihii la soo dhaafay colaad beeleedyada, waxaana Maamulka Galmudug uu ku guuldareystay waxka qabashada dagaal beeleedyadaas.
Previous articleAbiy Axmed oo sheegay in xoogag shisheeye ka qeyb galeen dagaalka Gobolka Tigreega
Next articleAl-Shabaab oo soo bandhigay askar ay sheegeen inay isku soo dhiibeen